Caalamka, 14 November 2018
Arbaco 14 November 2018
Cayaaryahan Cabdi Dheere oo ku geeriyodoay Canada
Israel oo joojisay dagaalkii Gaza
Ra’iisul wasaaraha Israel Benjamin Natenyahu ayaa difaacay go’aan uu ku joojiyey dagaalkii Gaza kadib markii hogaamiyayaasha Xamas ay aqbaleen xabad-joojin ay dhex-dhexaadisay Masar.
Ciidamada Israel oo weeraray Gaza
Milatariga Israel ayaa xalay duqeymo la beegsaday Marinka Gaza, ayaga oo sheegay inay ka jawaabayeen boqolaal gantaal oo Israel looga soo tuuray Gaza.
Rabshado ka dillaacay magaalada Gaza
Ra’iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa soo gaabinaya booqasho uu ku joogo magaalada Paris kadib markii rabshado ay ka dilaaceen magaalada Gaza.
Soomaali weerar ka gaystay Australia
Booliska dalka Australia ayaa sheegay maanta oo Jimca ah in nin Soomaali ah uu mindi ku weeraray saddex qof, magaalada Melbourne, isagoo mid ka mid ah dilay, ka hor inta aysan boolisku toogan.
Turkiga oo soo bandhigaya caddeymaha dilka Khaashuqji
Wasiirka arrimaha dibedda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa maanta sheegay in dowladdiisa ay hayso xog cusub oo ku saabsan dilka weriyaha Sacuudiga Jamaal Khaashuqji, islamarkaana ay dadweynaha usoo bandhigi doonaan caddeymaha.
Mareykanka oo dib usoo celiyey xayiraadii Iran
Ninka qaba Asia Bibi oo codsi u diray Trump
Ninka qaba haweeney kirishtan ah, oo sideed sano xabsi ku yaalla dalka Pakistan ugu jirtay eedeymo la xiriira inay aflagaadeysay nebi Muxamed NNKH ayaa ka codsaday madaxweyne Donald Trump inuu magan-galyo siiyo.
Hogaamiyaha Mucaaradka Bahrain oo Xabsi Daa'in Lagu Xakumay
Maxkamadda Sare ee racfaanka dalka Bahrain ayaa maanta xakun xabsi daa’in ah ku ridday saddex xubin oo ka tirsan mucaaradka dalkaasi.
Afghanistan: Mas'uuliyiin ku dhintay diyaarad soo dhacday
Diyaarad milatari oo sidday saraakiil sare ayaa ku dhacday gobolka gableedka dalka Afghanistan ku yaalla ee Farah, halkaasi oo ay ku dhinteen 25 qof oo diyaaradda saarnaa.